Gavin Evans မှ "အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေး" ဆောင်းပါးကို“ အလွန်အကျွံလေ့လာခြင်းကသင့်ကို Erectile Dysfunction ကိုပေးနိုင်သလား။ (2018) - Porn တွင်သင့် ဦး နှောက်
ကံမကောင်းစွာ YBOP နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရသေးအခြား debunk ရမယ် ယောက်ျားရဲ့ကနျြးမာရေး porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ငြင်းပယ်ဝါဒဖြန့်အပိုင်းအစ။ လက်ရှိဆောင်းပါး YBOP ့လအနည်းငယ်အကြာ debunked အခြားအထင်အမြင်မှားစေဆောင်းပါးကိုကိုထင်ဟပ်: "သင် porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုစိတ်ပူဖြစ်သင့်သလဲ" Debunking - The Daily Dot ရဲ့ကို Claire Down ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ (2018).
ငါတိကျတဲ့အခိုင်အမာဖြေရှင်းခြင်းမပြုမီ, ဒီမှာကြောင်းလေ့လာမှုများများမှာ Gavin အီဗန် သတိမမူ (?):
porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကနေပြန်လည်နာလန်ထူ၏အချို့ 3,000 ဦးပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပုံပြင်များ (အကောင့်ပြန်ဖွင့် 1, အကောင့်ပြန်ဖွင့် 2, ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 3, က Short PIED ပြန်လည်နာလန်ထူပုံပြင်များ).
ကျွမ်းကျင်သူမြောက်မြားစွာကိုကိုးကားပြီးဆောင်းပါးပေါင်း ၁၄၀ ကျော်နှင့်အင်တာဗျူးများ အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ။
porn / လိင်စွဲ? ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 50 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်သူတို့စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
အဆိုပါ ယောက်ျားရဲ့ကနျြးမာရေး featured ဆောင်းပါးများ ဒေါက်တာနီကိုးလ် Prause, PIED debunking နှင့်အတူအစွဲအလမ်းကြီးသူတစ်ဦးသည် non-ပညာသင်နှစ်တစ်ဦးလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်ဘဲလျက် ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ဆန့်ကျင်3နှစ်စစ်ညစ်ညမ်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှုများမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့်လူငယ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းများပြုလုပ်သည်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ။ ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 10, အဲလက်စ် Rhodes # 11, Gabe Deem & Alex Rhodes # 12 အတူတူ, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes # 13, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #14, Gabe # 4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #15.
Prause တစ်စုဆောင်းထားသည် ရှည်လျားသောသမိုင်း အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေပျက်ဆီးအထောက်အထားအစီရင်ခံရန်ဝံ့တဲ့သူစာရေးဆရာ, သုတေသီများ, ကုသ, သတင်းထောက်များကိုနှင့်အခြားသူများနှောင့်ယှက်၏။ သူမသည်ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေ, ဒီထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယားအဆိုပါအဆိုအရ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်လူများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved ပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။) ။ ဒါဟာအစ Prause ရှိစေခြင်းငှါပုံပေါ် ဘာသာရပ်များအဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော် အခြားညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုကတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ အဆိုပါ FSC ဘာသာရပ်များစွပ်စွဲအပေါ်သူမ၏ငှားရမ်းထား-သေနတ်လေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ် "orgasm တှေးတောဆငျခွ" အစီအစဉ်။ Prause ကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများ အကွောငျး သူမ၏လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို နှင့်သူမ၏ လေ့လာမှုရဲ့နည်းစနစ်။ ပိုပြီးစာရွက်စာတမ်းများအဘို့အတွေ့: နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း
အများစုမှာယောက်ျား porn watch, ဒါကြောင့်သင်များလွန်း X-rated ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခဲ့သောကြောင့်အမှန်တကယ်လိင်အပေါ်ထွက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့၏အတွေး, နားလည်သဘောပေါက်တဲ့တော်တော်ကြောက်စရာအလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ porn စောင့်ကြည့်သောလူတို့၏အပြည့်အဝမယ့်ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကိုယေဘုယျ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုသုံးစွဲဖို့နည်းနည်းချီတုံချတုံခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏အလေ့အထလေးနက်စေနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိအပေါ်အနည်းငယ်ပိုပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရရှိရန် Ph.D နှင့်အတူအနည်းငယ်လိင်သုတေသီများမှပြောဆိုသော သင့်ရဲ့လိင်ဘဝနှင့်အတူပြဿနာများကို။
စီရင်ချက်လား။ “ ညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု” ဟူသောအယူအဆကိုထောက်ခံသည့်သိပ္ပံဆိုင်ရာအထောက်အထားမရှိပါ။
"လိင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုပြသပြီဟုသုံးဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများရှိပါသည် erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာမသက်ဆိုင်သောဖြစ်ပါတယ်" ဟုနီကိုးလ် Prause, Ph.D ဘွဲ့ကို, Liberos ကိုတည်ထောင်သူ, Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့လိင်သုတေသနနှင့်ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီကပြောကြားသည်။ (သင်သည်သူတို့အားလေ့လာမှုများရှာတှေ့နိုငျ ဒီမှာ, ဒီမှာနှင့် ဒီမှာ.)
“ လေ့လာမှုနှစ်ခုစလုံးကိုလေ့လာမှုတစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူး။ "ဒီကုထုံးဆရာတွေကစာသားတွေကဒီလူနာတွေနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့ယူဆကြတယ်။ "
အမ် ... လေ့လာမှုတစ်ခုအရ porn အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်မဆက်စပ်ကြောင်းပြောဆိုခြင်းသည်မှားသည်။ တကယ်တော့မှာတော့ ယခုရှိပါတယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက်နီးပါး 40 လေ့လာမှုများ။ ၎င်းသည်ဆက်စပ်မှုလေ့လာမှုများမျှသာမဟုတ်ပါ ပထမဦးဆုံးအ7လေ့လာမှုများ စာရင်းတွင်ဆန္ဒပြ causation, သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေအဖြစ်။ သူတို့နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (ED, Anorgasmia, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်နိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ) အနာကိုငြိမ်းစေ - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များညစ်ညမ်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်လူပျိုတို့မေးမွနျးသောကွောငျ့ရိုးရှင်းစွာ ထား. , porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများတည်ရှိ။ တကယ်တော့မည်သူမဆိုစစ်ဆေး?
သူကိုးကားခဲ့သောလေ့လာမှု ၃ ခုနှင့် ပတ်သက်၍ Prause ၏ပြောဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
"လိင်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တာဟာ Erectile ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတာပြတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုသုံးခုပါ။ " (သင်သူတို့အားလေ့လာမှုများကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ဒီမှာ, ဒီမှာနှင့် ဒီမှာ.)
ပထမ ဦး စွာအဘယ်သူမျှလေ့လာမှုများ "ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများ" ခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်ပြောဆိုချက်ကိုလျစ်လျူရှု။ လေ့လာမှုတွင်ဖော်ပြထားသောပထမဆုံးလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသောအယူအဆကိုအမှန်တကယ်ထောက်ခံသည်။ လေ့လာမှုတွင်အသည်းအသန်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ၏ ၇၁% သည်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည် ဤသည်မှာစာနယ်ဇင်းသမားများအနေဖြင့်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးရန်ပျက်ကွက်သည့်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် ဒါကြောင့်မကြာခဏလုပ်ပေးရန်ပျက်ကွက်ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုဆောင်းပါးများရေးသားခြင်း။ စာရင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဒုတိယနှင့်တတိယစာတမ်းများ (လေ့လာချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ) သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာပေများတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များနှင့်နည်းစနစ်များကိုများစွာမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရွက် ၃ စောင်ကိုကျွန်ုပ်တို့သီးခြားဆန်းစစ်ပါမည်။
စက္ကူ #1: Sutton et al ။, 2015:
115 ဆက်တိုက်အမျိုးသားဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးကဘက်စုံဇယားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2015): Hypersexuality လွှဲပြောင်းအမျိုးအစားအားဖြင့်လူနာလက်ခဏာ နာတာရှည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းစသည့် hypersexuality မမှန်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောအမျိုးသားများ (ပျမ်းမျှအသက် ၄၁.၅) ကိုလေ့လာခြင်း။ အမျိုးသား ၂၇ ယောက်ကို“ ရှောင်လွှဲနိုင်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” ဟုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုဖြင့်တစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်ပတ်လျှင် ၇ နာရီအထက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ နာတာရှည် porn မှ masturbated သူယောက်ျား၏ 71% 33% အစီရင်ခံနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် (porn-သွေးဆောင် ED မှမကြာခဏရှေ့ပြေး) နဲ့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများကိုသတင်းပို့.
ကျန်ရှိနေသေးသောအမျိုးသားများ၏ ၃၈% သည်မည်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသနည်း ဒီလေ့လာမှုကမပြောနိုင်ပါဘူး၊ ပြီးတော့စာရေးသူတွေကအသေးစိတ်တောင်းခံရန်ထပ်ခါတလဲလဲတောင်းဆိုမှုများကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည်။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အဓိကရွေးချယ်မှုနှစ်ခုမှာ 'erectile dysfunction' နှင့် 'low libido' ဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးသားများသည်၎င်းတို့၏ erectile လည်ပတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခြင်းမခံခဲ့ရကြောင်းသတိပြုသင့်သည် ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ။ ဤအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု porn မှ masturbating ပါဝင်ပတ်သက်လျှင်မူကား, မဟုတျဘဲတနာတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်, များစွာသောသူတို့က porn-သွေးဆောင် ED ခဲ့သတိမထားမိဖြစ်လိမ့်မယ်။ (သာသူမ၏သိအကြောင်းပြချက်များအတွက် Prause နာတာရှည် porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏တည်ရှိမှု debunking အဖြစ်ဤစာတမ်းတွင်ကိုးကား။ )
စက္ကူ #2: ချီးကျူးခြင်း & Pfaus, 2015 ။
နောက်ကွယ်မှအဖြစ်မှန် ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015: ဒီဟာက ED နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာလုံးဝလေ့လာမှုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ Prause ကသူမ၏အစောပိုင်းလေ့လာမှုလေးခုမှအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခဲ့သည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်၊ Nicole Prause နှင့် Jim Pfaus တို့၏ဤစာတမ်းသည် peer-review ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ခြင်းကြောင့်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်မှာသူတို့၏စာတမ်းပါအချက်အလက်များသည်အခြေခံကျသောလေ့လာမှု (၄) ခုမှအချက်အလက်နှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကွာဟမှုအသေးစားကွာဟချက်မဟုတ်, plugged မရနိုငျသောအပေါက်တွင်း။ ထို့အပြင်စာရွက်သည်မှားယွင်းသောသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အချက်အလက်များမှထောက်ခံမှုမရသည့်ပြောဆိုမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Dr. Isenberg ၏ဝေဖန်မှုကို Prause & Pfaus တုန့်ပြန်မှုတွင်စာရေးသူများသည်၎င်းတို့၏ခိုင်မာသောခိုင်လုံသောဖော်ပြချက်ကိုပံ့ပိုးရန်အတွက်မည်သည့်ဒေတာကိုမှမပေးခဲ့ပါ။ အဖြစ် ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစာရွက်စာတမ်းများ, Prause & Pfaus တုန့်ပြန်ချက်သည်ဒေါက်တာ Isenberg ၏တရားဝင်စိုးရိမ်မှုများကိုရှောင်ရှားရုံမကများစွာပါ ၀ င်သည် အသစ် မှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းနှင့်အတော်ကြာလင်းမြင်သာမှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ စာပေ၏သုံးသပ်ချက် ကျွန်မအပေါ် commented7ရေတပ်ဆရာဝန်များနှင့်အတူရေးသားခဲ့သည် ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015:
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်လည်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလူပျိုတို့ထလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများမသက်ဆိုင်သောကြောင်းဟုဆိုကာနှစ်ခု 2015 စာတမ်းများလည်းပါဝင်သည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများသည်ဤစာတမ်းများ၏ပိုမိုနီးကပ်စွာစာမေးပွဲနှင့်ဆက်စပ်တရားဝင်ဝေဖန်မှုများအပေါ်အချိန်မတန်မီဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအစက္ကူ [နုပျို ED လိင်အေးစက်၏အလားအလာအခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. အသုံးဝင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပါရှိသည်50] ။ သို့သော်ဤပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုသည်အမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ ချန်လှပ်မှုများနှင့်နည်းစနစ်ဆိုင်ရာအားနည်းချက်များကိုဝေဖန်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောစိုက်ထူခြင်းဆိုင်ရာရလဒ်ရလဒ်အတိုင်းအတာအတွက်စာရင်းအင်းရလဒ်များမရှိပါ။ ထို့အပြင်သုတေသနသမားတစ် ဦး ကဤစာတမ်း၏တရားဝင်ဝေဖန်မှုတွင်ထောက်ပြသကဲ့သို့စာတမ်း၏ရေးသားသူများက“ စာဖတ်သူကိုလေ့လာခဲ့သောလူ ဦး ရေနှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်မှုများကို၎င်းတို့၏နိဂုံးကိုခိုင်လုံစေရန်လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမပေးခဲ့ပါ”51] ။ ထို့အပြင်အဆိုပါသုတေသီများသည်လွန်ခဲ့သောလကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသာနာရီစုံစမ်းစစ်ဆေး။ သို့သျောလညျးတစျယောကျတညျးကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနာရီကြာ၏ variable ကို "နေ့စဉ်အသက်တာ၌ပြဿနာများ", အ SAST-R ကို (စမ်းသပ်ပြလိင်စွဲလမ်း) တွင်ရမှတ်များ, နှင့် IATsex အပေါ်ရမှတ် (အနေနဲ့တူရိယာမှကျယ်ပြန့်သက်ဆိုင်တဲ့ကြောင်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်လေ့လာမှုများတွေ့ပြီ ကြောင်း [) အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှစွဲအကဲဖြတ်ထားပါသည်52, 53, 54, 55, 56] ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း (cue reactivity ကို), အားလုံးစှဲအတွက်စွဲလမ်းအပြုအမူတစ်ခုထူထောင် Correlate ကြည့်နေစဉ်တစ်ဦးကပိုကောင်းခန့်မှန်းပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ ratings ဖြစ်ပါတယ် [52, 53, 54] ။ အင်တာနက်ကဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုစွဲလမ်းအပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းမထားဘူးကြောင်းတိုးပွားလာတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်။ [ "ရှယျခကျြ, အကျိုးဆက်များနှင့်အပြုအမူ၏ Contextual ဝိသေသလက္ခဏာများလည်းအကဲဖြတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလျှင်စွဲလမ်းမှုသာစနစ်တကျအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်"57] ။ (အသုံးပြုမှုနာရီထက်အခြား) "hypersexuality" အတွက်အမျိုးမျိုးသောသတ်မှတ်ချက်ကိုအသုံးပြုပြီးအခြားသုံးသုတေသနအဖွဲ့များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အတူကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းရှိသည်ဟု [15, 30, 31] ။ အတူတူယူ, ဒီသုတေသနကြောင့်မဟုတ်ဘဲရိုးရိုး "အသုံးပြုမှုနာရီ" ထက်အကြံပြု, မျိုးစုံ variable တွေကိုညစ်ညမ်းစွဲ / hypersexuality ၏အကဲဖြတ်အတွက်အလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဖွယ်ရှိလည်းအလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာညစ်ညမ်း-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အကဲဖြတ်ပါ။
စက္ကူ #3: Landripet & Štulhofer, 2015 ။
သောအရေးဆိုမှုအဖြစ် Landripet & Štulhofer, 2015 porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအကြားမျှဆက်ဆံရေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအတွက်မှတ်တမ်းတင်အဖြစ်ဤစကားမှန်သည်မဟုတ် ဒီ YBOP ဝေဖန်မှု နှင့် စာပေ၏ဤသုံးသပ်ချက်ကို။ ထို့အပြင် Landripet & Štulhofer၏စက္ကူတွင်သူတို့တင်ပြသောထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုသုံးခုကိုချန်လှပ်ထားသည် ဥရောပညီလာခံ (ပိုမိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) စာရွက်စာတမ်းမှစာပိုဒ်သုံးပိုဒ်၏ပထမနှင့်စတင်ကြပါစို့ Landripet & Štulhofer, 2015:
တိကျတဲ့ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားများများအတွက် preference ကိုအစီရင်ခံ [လုပ်နည်းကျွမ်းကျင်သူ] သိသိသာသာ erectile နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် (သို့သော် ejaculatory သို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒ-related မဟုတ်) အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု.
လိင်မှုကိစ္စပြတ်လပ်မှုပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုပိုမိုများပြားလာခြင်းတို့ကြောင့်သိသာသောဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်မကျင့် Landripet & Štulhofer ၂၀၁၅ ခုနှစ်အစီရင်ခံစာအရသူတို့သည်အမျိုးသမီးများ၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများနှင့်အမျိုးသားအနည်းငယ်တို့အကြားသိသာသောဆက်နွယ်မှုများတွေ့ရှိခဲ့သလား။ အဘယ်ကြောင့်ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုŠtulhoferမှမဆိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပြီမဟုတ် များစွာသောလေ့လာမှုတွေ ဤအတူညီဒေတာအစုံမှပေါ်ပေါက်? မိမိအသင်းသူတို့ porn-သွေးဆောင် ED debunks ဖြစ်သော်လည်း, porn အသုံးပြုမှုများ၏အနုတ်လက္ခဏာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖုံးကွယ်အကြောင်းကိုသုံးစွဲသူများကိုအကြောင်းကြားရန်အလွန်နှေးကွေးတောင်းဆိုဒေတာထုတ်ဝေရန်အလွန်လျင်မြန်ပုံရသည်။
အောက်ခြေလိုင်း: အားလုံးရှုပ်ထွေးပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများစာနယ်ဇင်းများတွင်ဝေး-ရောက်ရှိကွညောသင့်လျော်သောမီဆိတ်ကွယ်ရာ teased ရမည်ဖြစ်သည့်မျိုးစုံအချက်များ, ပါဝငျသညျ။ Landripet & Štulhofer ကြေငြာချက်“ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများ၏အလိုဆန္ဒ၊ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောအခြားဖြစ်နိုင်ခြေများကိုလျစ်လျူရှုသောကြောင့်သုံးစွဲသူများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သူတို့တွေ့ရှိခဲ့သောအမျိုးအစားများသို့မြင့်တက်လာခြင်း၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုအတွက်အပိုဒ်2&3Landripet & Štulhofer, 2015:
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှ စ၍ ငယ်ရွယ်သော ED တွင် ၅၀၀% မှ ၁၀၀၀% တိုးလာခြင်းကိုသာမန်အချက်များနှင့်မရှင်းပြနိုင်ပါ
(ပူးပေါင်းလိင်များအတွက်) အနိမ့်လိင်စိတ်: 2010 ကတည်းကငယ်ရွယ်အထီးလိင်အကဲဖြတ်လေ့လာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အသစ်တစ်ခုဘေး၏တုန်လှုပ်နှုန်းထားများ၏သမိုင်းဝင်အဆင့်ဆင့်သတင်းပို့ပါ။ ဒီ Lay ဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်တမ်းတင် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက် အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016) ။
အခမဲ့ streaming porn (2006) ၏ထွန်းမတိုင်မီက Cross-Section လေ့လာမှုများနှင့် Meta-analysis သည်တသမတ်တည်း2အောက်မှာလူ 5-40% ၏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ % 10 မှ 2010% ကနေ 14 အကွာအဝေးကတည်းကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ 35 လေ့လာမှုများအတွက် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်း, 16% ကနေ 37% အထိစဉ်အနိမ့်လိင်စိတ်များအတွက်နှုန်းထားများ (hypo-လိင်) အကွာအဝေး။ သည်အခြားလေ့လာမှုများယောက်ျား 25 ပါဝင်ပတ်သက်နေနှင့်အောက်တွင်စဉ်တချို့ကလေ့လာမှုများ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ယောက်ျား 40 နှင့်အောက်တွင်ပါဝငျသညျ။ အများဆုံးသိသိသာသာမကြာသေးခင်ကဥပမာ (2018) ၏တစ်ခုမှာပညာရေးအတွက်၏စစ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် porn သရုပ်ဆောင်များကို။ 30 အောက်မှာသူတို့သည်ကွီးရှယျအိုမြားအဖြစ်နှစ်ကြိမ် ED နှုန်းရှိခဲ့ပါတယ် (အဘယ်သူ၏လိင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း highspeed အင်တာနက်က porn မှဝင်ရောက်ခွင့်မရှိဘဲတီထွင်) ။ မြင် အမျိုးသားအရွယ်ရောက် Entertainment များထဲတွင် Erectile အလုပ်မဖြစ်: တစ်ဦးကစစ်တမ်း။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်း ED ED နှုန်းသည် ၅၀၀% မှ ၁၀၀၀% အထိတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒီနက္ခတ္တဗေဒမြင့်တက်မှုအတွက်အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့်လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အတွင်းအဘယ်ပြောင်းလဲမှုပြောင်းလဲသွားသနည်း။ ဒီနေ့ညစ်ညမ်းစားသုံးသူတွေဟာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှပူစရာမလိုဘူးလို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာမပြောခင်သုတေသီတွေကမကြာသေးခင်ကမှစာရင်းသွင်းဖို့လိုနေသေးတယ်။ နုပျို ED နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်လာ, အ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်အများအပြားလေ့လာမှုများ, ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာများ၏ထောင်ပေါင်းများစွာနှင့် ဆရာအစီရင်ခံစာများ porn: တစ်ခုတည်း variable ကိုဖျက်သိမ်းရေးအားဖြင့်ပညာရေးငြိမ်းစေလျက်ယောက်ျား၏။
ယောက်ျားရဲ့ကနျြးမာရေး မှ Ian Kerner ကိုးကားပေမယ့်အတိတ်အတွက် Kerner porn လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဖော်ပြထား!
ထဲမှာ ယောက်ျားရဲ့ကနျြးမာရေး ဆောင်းပါး (တစ်ဦး AASECT ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်သူ) Kerner ပွေီးမှနှင့်ညစ်ညမ်းအပြစ်တင်ရှောင်ရှားရန်လှည့်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကျန်းမာရေးလူပျိုတို့အတွက်နာတာရှည် ED ဖြစ်စေသောအားကောင်းမောင်းသန်:
porn နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုစောင့်ကြည့်အကြားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမျှမရှိစေခြင်းငှါသော်လည်း, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစိုက်ထူပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်အချို့သောကိစ္စများတွင်ကြောင်းအတွက်သွယ်ဝိုက်တစ်ဦးရှိပါတယ်။ မှ Ian Kerner, Ph.D ဘွဲ့ကိုကရှင်းပြသည် "ငါ့လက်တွေ့အတွေ့အကြုံကို၌ငါ porn [erectile ရောဂါ, အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်း, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်] ၏တိုက်ရိုက်အကြောင်းမရှိစေခြင်းငှါရှာမပါဘူး" နှင့် psychotherapist နှင့်လိင်တိုင်ပင်လိုင်စင်။
Kerner ဘာမျှမကိုးကားကြောင်းသတိပြုပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လူငယ်များတွင်နာတာရှည် ED ကိုဖြစ်စေသည်ဟုသူ၏မထောက်ခံသောပြောဆိုချက်ကိုဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ကသဘောတူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Kerner, Prause နှင့် David Ley တို့ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအများပြည်သူအားမှားယွင်းစွာလမ်းလွဲစေရန်မှန်ကန်သောအကြောင်းအရင်းအဖြစ်လမ်းလွဲစေခဲ့သည်။ ဤမီးခိုးနှင့်ကြေးမုံနည်းဗျူဟာအကြောင်း YBOP မှဤနေရာတွင်ရေးသားခဲ့သည်။ Sexologists တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟုဆိုကာခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ငြင်းပယ်ပြဿနာ (2016) ဖြစ်ပါသည်.
မှ Ian Kerner AASECT များအတွက်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး၏ကုလားထိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်မီ, သူ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ 2013 Kerner undercuts ရာ Kerner အားဖြင့်အောက်ပါ 2018 ဆောင်းပါး, (ဒီတစ်ခါလည်း AASECT ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာသဖြင့်သူကမဖြစ်မနေခံစားခဲ့ရကိုကြည့်ပါ ကုမ္ပဏီလိုင်းအတိုင်းလိုက်နာရန်။ ):
Gavin အီဗန်၌သူ၏ဆောင်းပါး update လုပ်ဖို့လိုပေမည် ယောက်ျားရဲ့ကနျြးမာရေး... ဒါပေမယ့်ငါအသက်ရှုမကိုင်ပါလိမ့်မယ်။